Torbee lamaa booda waraanni Oromiyaa guututtii labsamuuf! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTorbee lamaa booda waraanni Oromiyaa guututtii labsamuuf!
Jeeneraala Biraanuu Juulaa fi obboo Abiyyi Boo’aa jiruu!!
Gootichi gaachani ummataa Oromoo WBO n injifannoo galmeessiseen Abiyyiif Biraanuun Juulaa mataa qabatanii iyyaa jiraachuu maddi raayyaa ittisaa biyyaa keessaa nu gahee ni ibsaa.
J. Biraanuu Juulaa gaaga’amaa waraanaa (waraanaa Abiyyii fi Biraanuu) fi qabeenya isaanirratti gaheen hedduu jeeqamanii ajajjoota waraanaa kallattii hundumaa jiraan waliin wal dhabdee hamaa keessaa jirachuu maddi waajjiraa Biraanuu Juulaa argamee ni addeessaa.
Carraa maayii qabnuu filmaataa duraa olaantummaa waraanaa gonfachuuf torbee lama booda Operations jabaa WBO, miseensoota Adda bilisummaa Oromoo, KFO, PBO fi Oromiyaa guutuutti baanuuf mootumaan karooraa baafatee qophii taasisaa jirachuun biraa gahameera.
Duula amma karoorfamee milkeessuuf ajajjoota waraanaa dhihaa fi kibbaa Oromiyaa jiraan addaatti gumaachaa isiin qopheessinee, akkasumas badhaasa qarshii f aangoo qopheessuu isaanni waadaa seenaaf jiruu. Haa ta’uu malee Waadaa kun garuu sobaa ta’uu ajajjooti waraana fi odeeffannoo, hubannoo wan qabaniif Jeeneraala Biraanuutti kolfaa jirachuu odeeffanneera.
WBO kallattii jirtuun boquu diinaa daraan cimsitee cabsuuf qophii kee jabeeffadhaa n dhaamsa keenya.
Via Hundee Lammii
Oromiyaan akka Nafixanyaa jalaati bultuu Col/Abiy Ahammed mirkanesse kuno waraana Amaraa irra fudhee Oromiyaan keesatti linjii tikkoo iti keenyee Oromiyaa keesati yeroo amma kana akka malee facaasee akka jiruu dha oddeefanoon akka jiruti.
Kanafuu Oromoon hundi off eegannoo gochuu qaba amma calqabee jeedhu ergaan keesan nu gahee.
Yeroo kana Oromiyaa irrat an godhamaa jiruu an sirna Menilki caalu dha jeecha jiruu. Kanafuu Oromoon hundi qabsoo dandii irra badee kana deefacuu dhaf qeerroo fi qareen tokkumma dhan kahee falmachuu banaan Oromoo dhaf dhumee jeedhuu. Kanuma.
Shari waalif godha
Eegdoota Warraaqsa Oromiyaa.
Muudama Sirna Hafteen EPRDF Taasisaa Jiru Kan Muddamaa Fi Humnaan Aangoorra Turuuf Mallattoo Argsiistuudha.
Ergaan muddamaan wal muudaa jiran kun sochii abdii kutannaa fi gufuu siyaasaa karaa nagaa ittiin Ummattoota biyyattii sobuuf mallattoo argisiistuu jala bultii filannoo dharaa kanaaf amaamoota filannichaaf dabarsu qaba. Qaamni mootummaa ofii jedhu filannoof qophaahaa jira jedhamee dhaabbilee siyaasaa biroof taayitaa dabarsuuf fedhii akka hin qabne mirkanii taasisee jira.
Humnaan of jiraachisuuf morteeffatee akka jiru namoota haaraa muuduun ragaan gahaan dhugoomsee jira. Muudamni godhame kun muddamaa fi ariitiin tahe malee silaa filannoma sobaa kanaan booda tahuu qaba ture. Dursanii namoota amanamoo bakka qabsiisuun isaanii jaarmiyaan siyaasaa qophii finalloof jecha wareegama darbaa baasaa jiran cidha masaanuu isaanii faayanii beekamtii kennuuf akka jiran mirkanaahee jira.
Biyya mootummaan hin jirre keessatti murna ayyaanlaallattoota kanneen komachuu fi hamachuun barbaachisaa hin turre. Yeroon kun yeroo mootummaa ceehumsaa ijaaran akka tahe Eegdootni Warraaqsa Oromiyaa EWOn akeekee ture fudhachuu dhabuun akka gareen haftee wayyaanee kunneen of jabeessee dhiittaa mirga namoomaa geggeessu carraa uumeefii jira.
Mootummaa ceehumsa ijaaruun yoo rakkises Ummata miidhaa fi dararaa keessummeessaa jiru waliin fala tahuu qabu marii gochuutu furmaata waaraa fida jennee amanna. Warraaqsi Ummataa abbaa irree wayyaanee hiddaan buqqise garee harcaatuu kanatti xumura gochuun ni dandahama. Haa tahuu malee jaarmiyaa siyaasaa baranee haala waliin deemuu fi murtoo jajjabduu fudhatu dhabuu fi guduunfaa itti gochuuf qoohii tahuu dhiisuu akka tahe beekamaadha. Ammas Ummatni keenya haala rakkoo dhufaa jiru qolachuuf qophaahuu murteessaadha.
##Oduu ajaa’ibaa !
#Sammuu doofaa keessaa cubbuu malee qajeellummaa hin biqiltuu!
##Obboo Abiyyi Ahamed muudamaa adda kennee!
#Obbo Taayyee Dandaa’aaf Obbo Biraanuu Leenjisoo muudamaa adda fudhataan
Taayyeef Biraanuun ololaa sobaa, afaanfajjii qabsoo oromoo irraati barreessuuf muudaman.
#Obbo Taayyee Danda’aa dhimmaa obboo Jawaar M. Balaalleffachuu, qeeqaa barreessuun toora Facebook akka maxxansuu dirqamni guutuun kennameef jira. Akkasumaas Obbo Biraanuu Leenjisoo dhimmaa ABO fi hooggana ABO balaaleffachuu, oduu dharaa tamsaasuuf dirqamni jabaan itti kenameera. Biraanuu leenjisoo waajiraa Televizhiinii haaraa obboo dammaqaa gadnaaqaa saaquuf deemuu keessaadha.
#Obbo Taayyeen qaruuteef suuftuu mootummaa TPLF ta’ee manneen hidhaa Finfinnee keessaati muuxxannoo waggaa 10 kan qabuu yoomu ta’uu sabboontotaa Oromoo ragaa sobaan lubbuu ijoollee keenya murtoo kennisiisa tureeraa. Fakkenyaaf Gaaddisaa Hirphaa, Alamaayyoo Garbaa , ….. kijibaa inni odeessaa tureen wareegaman. Gochii raawwachaa ture hanqatee lafee oromoo cabsuu ittuma fufiinsa dalagaa jira.
#Humni adda baayinni 10,000 taa’an wareegamaa lubbuu baasuuf dirqamaanni bobba’aniitii dabalataa, oduu sobaaf ololaa Taayyee fi Biraanuu Leenjisoo qopheessaan akka tamsaasan dirqamni dachaa itti kennameera.
#Sammuu doofaa keessaa cubbuu malee qajeellummaa hin biqiltuu.
Maqaaf warri ogummaa seeraa barataniif osoo hin xumuriin dirqamaa hogganummaa biyyaatti ramadaman naamusaa ogummaa bishaanitti naqaan.
#Miseensoonni humni adda waraanaa jechuun torbaan darbaa ji’oota sadiif leenjifaman Oromiyaa kallattii hundaan uummataa Oromoo roorrisuuf bobbaafaman dirqamaa dachaa kennamuusaa adda baafameera.
#Miseensoonni humni adda jedhaman kun baayeen isaan umrii gana 22 gadi yoomuu taa’an dhiphinaa jireenyaa moohachuuf Poolisii Oromiyaa tataa’u jedhaman gowwoomsuun ji’oota sadi leenjjii safisaa kennameef booda dirree waraanaatti ergamaniiru.
#Hundeen miseensonni humni adda kun waraanuu miti leenjiin kennameef qorqalbiin qaban akkaataa ofii ittisamu wan isaan dandeessisuu mitii. Haaluma kana ka’ee kallattii waraanni WBO jiruu barbaadu harkaa lataa jiruu.
#Wanni ajaa’ibaa hedduu namaa raajjuuf dirqamni addunyaa irraatti argamee hin beennee ijoollee kanaaf kenameera. Dirqamni dachaa kannemee dirree lolaa ergamuu isaanitti.
1: Barreeffama Obboo Taayyee Danada’aan toora FB irraatti maxxanfamu hordofuu dhaan share fi like gochuu, (Obbo Taayyeen dhimmaa Jawaar Mohamad irraatti xiyyeeffatee dirqamaa fudhateera)
2: Dirqamni Biraanuu Leenjisoo kename dhimmaa ABO fi hooggana ABO irraatti barreessa. Humni adda kun like fi share gochuun dirqamaa murteessaa itti kennameedha.
#Abiyyii doonni kompaasii dhabdee ta’ee qondaaloota murachaa jira. Siyaasni ololaan qajeellee hin jiruu. Oromoon maal akka barbaaduuf akkamitti haqa qabuu gonfachuu dandahuu jala muree ni beeka. Kanaafuu qabeenyaa qisaasu dhaabaatti qabeenyaa ololuudhaaf oduu dharaa baaftan osoo boruuf kaawwataniin itti fayyadamtu dhaamasa sabboontotaa Oromootti.
Humnootni daangaa Oromiyaa cehanii dhufan ammaan booda sochii bifa kamuu gochun dhorkaa dha! Ibsa Mootummaa…